Soo dejisan Total Commander 2.62 – Android – Vessoft
Total Taliyaha – software multifunction si ay u maareeyaan files iyo fayl nidaamka ah. Software ka kooban yahay laba daaqadaha kaasoo u ogolaanaya in ay sameeyaan wax badan oo falalka la faylasha nidaamka, kaadhka xusuusta, codsiyada iyo qaybaha kale ee qaybaha kala duwan ee qalabka. Total Taliyaha taageertaa dhammaan hawlaha file weyn ee qalabka xogta iyo bixisaa xidid-xuquuqdooda si ay u maareeyaan files la soo xareeyay. Software ayaa kuu ogolaanaya in aad loo kala rar ama ZIP buugagga taariikhda iyo haddii loo baahdo in cadaadin ah files waaweyn qaab ZIP. Total Taliyaha ku jira raadinta engine balaariyay oo taageero u ah sida diirada ku ool ah si aad u ogaato faylasha by koobin kala duwan. Sidoo kale software ah u saamaxaaya in ay ballaariso fursadaha u gaar ah oo ay isku xira plugins kala duwan.
Taageero buuxda oo ka howl galka
Search engine Extended
Connection ee plugins ah
Total Commander Software la xiriira: